काठमाडौँ, कात्तिक ११ गते । निर्वाचन आयोगले दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि कात्तिक १६ गते मनोनयन दर्ता गर्ने समयसीमा तोकेपछि वाम गठबन्धन दलका नेताहरूलाई क्षेत्र निर्धारण तथा उम्मेदवार छान्ने अन्तिम चटारो बढेको छ । शनिबारसम्म सबै क्षेत्रको उम्मेदवार टुङ्गो लागिसक्ने बताइएको छ ।
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको दोस्रो चरणको निर्वाचन मङ्सिर २१ गतेका लागि तय गरेको छ । ४५ जिल्लाका लागि हुन गइरहेको दोस्रो चरणको निर्वाचनका सबै उम्मेदवारको सूची गठबन्धनको तर्फबाट छलफल गरी पार्टी नेतृत्वलाई दिएको बताइएको छ । त्यस विषयमा नेकपा (एमाले) का शीर्ष नेता र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताले निर्णय गरेपछि अन्तिम रूप दिइने क्षेत्र निर्धारण कार्यदलका संयोजक तथा एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले बताउनुभयो ।
“कार्यदलको तर्फबाट सबै क्षेत्रका लागि उम्मेदवारको मोटामोटी टुङ्गो लगाई शीर्ष नेताहरूलाई सिफारिस गरेका छौँ, उहाँहरूको निर्णयका आधारमा शनिबारसम्म अन्तिम टुङ्गो लगाउँछौँ” संयोजक पोखरेलले बताउनुभयो । आवश्यक छलफल र संवादका आधारमा कार्यदलले क्षेत्र निर्धारण गरी उम्मेदवार सिफारिस गरेकाले खासै समस्या नआउने उहाँले दाबी गर्नुभयो ।
उम्मेदवार तय गर्ने विषयमा कार्यदलले निरन्तर दुवै दलका शीर्ष नेताहरूसँग परामर्श गर्दैआएको भए पनि केही जिल्लामा गम्भीर विवाद देखिएपछि शीर्ष नेताहरूलाई त्यस विषयको टुङ्गो लगाउन सिफारिस गरिएको कार्यदलका एक नेताले बताउनुभयो । अधिकांश जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्रमा सौहाद्रपूर्ण रूपले उम्मेदवार टुङ्गो लागे पनि केही जिल्लामा एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरूको साझा दाबीपछि टुङ्गो लगाउन सकस देखिएको छ । कार्यदलका सदस्य एवम् एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डेका अनुसार दाङ, सल्यान, झापा, मोरङ, सुनसरी, उदयपुर, कञ्चनपुर, चितवन लगायत जिल्लामा उम्मेदवारको टुङ्गो लगाउन वाम गठबन्धनलाई सकस परेको छ । यद्यपि शीर्ष दुई नेता एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को परामर्शबाटै ती क्षेत्रमा उम्मेदवारको सूची तय गर्ने तयारी भएको नेता पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।
वाम गठबन्धनमा सुरुदेखि क्षेत्र निर्धारण र उम्मेदवारको टुङ्गो लगाउने सकस देखिएको थियो । गोरखा २ को उम्मेदवार चयनमा सहजता नआएपछि नयाँ शक्ति नेपाल गठबन्धनबाटै बाहिरिएको थियो । नयाँ शक्तिका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराई र माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले दुवैले सो क्षेत्रमा दाबी गर्नुभएपछि विवाद भएको थियो । सोही विवादका कारण नयाँ शक्ति पार्टी गठबन्धन त्यागेर नेपली काँंग्रेससँग चुनावी तालमेल गर्न पुग्यो ।
सोहीअनुसार चितवन क्षेत्र नं. २ मा पनि गठबन्धनमा अल्झो देखिएको छ । सो क्षेत्रमा माओवादी केन्द्रका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’ र एमाले नेता कृष्णभक्त पोखरेल दुवैले दाबी गरेपछि नेताहरूलाई मिलाउन चुनौती देखिएको हो । एमाले नेता पोखरेल सोही क्षेत्रबाट २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुभएको थियो । त्यस क्षेत्रमा आफ्नो राम्रो प्रभाव रहेको भन्दै पोखरेलले सोही क्षेत्रबाट उम्मेदवार बन्ने दाबी गर्दैआउनुभएको छ ।
त्यस्तै, अन्य जिल्लाका केही क्षेत्रमा सामान्य विवाद रहेको कार्यदलका सदस्य पाण्डेले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार शुक्रबार पनि गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूबीच छलफल र परामर्श भएको छ । सोही परामर्शको आधारमा शनिबारसम्म अन्तिम निर्णय हुने आधार तय भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
निर्वाचन आयोगले पहिलो चरणमा मङ्सिर १० गते ३२ जिल्लामा र दोस्रो चरणमा मङ्सिर २१ गते ४५ जिल्लामा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन गराउने मिति तय गरेको छ । नवलपरासी र रुकुम गरी दुई जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्रको सीमा फरक परेपछि अहिले ७७ जिल्ला कायम गरिएको छ ।
धादिङकाे मार्पाककाे लापाडमा बस दुर्घटना: पन्ध�